Fadeexad weyn oo ah xadgudub ka dhan ah dumarka oo gilgishay dowladda Afghanistan - BBC News Somali
Haweeneydan waxay horay uga shaqeyn jirtay xafiisyada dowladda
Dalka Afghanistan waxaa gilgilay fadeexad ku saabsan tacaddiyada dhinaca galmada oo loo jeedinayo mas'uuliyiinta sar sare ee dowladda.
Saraakiishu waxay beeniyeen inay wax khaldan sameeyaan balse baaritaan qarsoon oo ay BBC-du sameysay ayaa lagu wareystay haween si wanaagsan u sharraxaya tacaddiyada galmo ee ka dhex jira xafiisyada dowladda.
Guri ku yaalla buuraleyda duleedka magaalada Kabul, waxaan kula kulannay haweeney horay uga tirsaneyd shaqaalaha dowladda Afqaanistaan.
Waxay codsatay in aqoonsigeeda la qariyo maadaama ay ka cabsaneyso in la ciqaabo.
Laakiin waxay dooneysaa in caalamka uu ogaado sheekadeeda.
Waxay noo sheegtay in ninkii horay madaxda ugu ahaa, oo ah wasiir sare oo ka tirsan dowladda, uu marar badan ku sameeyay xadgudubyo dhinaca jirka ah, maalin maalmaha kamid ahna, markii ay xafiiskiisa gashay uu isku dayay inuu weerar toos ah u geysto.
"Waxa uu si toos ah iiga codsaday inaan gogol dhaaf la sameeyo anigoo raalli ka ah. Balse waxaan u sheegay inaan ahay qof khibrad u leh shaqada una qalma. Waxaan ku iri waligey kuma fikireynin inaad wax noocaas ah igu dhihi doontid. Waan istaagay si aan uga baxo xafiiskiisa. Gacanta ayuu iga qabsaday wuxuuna ii kaxeystay qol ku yaalla qeybta dambe ee xafiiskiisa. Wuxuu igu khasbayay inaan aado dhinaca qolka isagoo i dhahaya, 'daqiiqado yar unbaan qaadan doonaa, ha walwalin, kaalay isoo raac' iyo waxyaabo lamid ah", ayey tidhi iyadoo ka sheekeyneysa maalintaas wixii dhacay.
"Xabadka ayaan gacanta uga riixay waxaana ku dhahay jooji. Ha igu khasbin inaan qeyliyo, markaas ayeyna ahayd xilligii ugu dambeeyay ee aan arko. Aad baan u carooday".
Dacwad miyey ka gudbisay dhacdadaas?
"Maya, waxaan iska casilay shaqada. Kalsooni kuma qabo dowladda. Haddii aad tagto maxkamadda ama booliska, waxaad arkeysaa sida uu musuqmaasuqa u saameeyay. Ma heleysid meel nabad ah oo aad u dacwootid, haddii aad afka kala qaadid qof walba haweeneyda ayuu eedda saarayaa", ayey tidhi gabadhan.
Haweeneydan horay uga tirsaneyd shaqaalaha dowladda Afghanistan waxay sheegtay in labo haween ah oo kale ay u sheegeen inuu isla wasiirkaas qudhiisa kufsi u geystay, inkastoo sheegashadaas aysan BBC-da u suurtagalin inay si madax bannaan u xaqiijiso.
"Waxaan wuxuu u sameeyaa si aan gabbasho lahayn, sababtoo ah ma cabsado maadaama uu yahay nin saameyn ballaaran ku leh dowladda", ayey tidhi.
'Kufsigu hadda wuxuu qeyb ka noqday dhaqanka'
Sidoo kale waxaan kula kulannay haweeney kale oo jecleyd inay sheekadeeda dibadda usoo bixiso.
Xafiiska madaxweynaha Afghanistan ayaa beeniyay eedeymahaas
Waxay shaqo ka codsatay dowladda, wax walbana way heysatay, balse waxaa gudaha loo fasaxay markii laga dalbaday inay la kulanto nin xulafo dhow la ah madaxweyne Ashraf Ghani.
"Ninkan wuxuu sawirrada lasoo gala madaxweynaha. Wuxuu iga codsaday inaan ugu tago xafiiskiisa khaaska ah. Wuxuu igu yidhi, soo gal oo fariiso, waxaan hubinayaa warqadahaaga. Wuu iisoo dhawaaday kaddibna wuxuu igu yidhi aan wax cabno oo gogol dhaaf sameyno", ayey tidhi.
"Waxaa ii furneyd labo waddo, oo ah inaan aqbalo codsigiisa ama inaan iska baxo. Xitaa haddii aan aqbali lahaana kaligiis kuma aysan ekaan lahayn, balse rag badan oo kale ayaa iga dalban lahaa inay ila seexdaan. Waxay ahayd arrin naxdin leh. Waan argagaxay waana iska baxay".
Shaqadiina ka warran?, ayaan weydiinay.
Waxay sheegtay inay isku dayday inay la hadasho xafiiska dowladda, waxaana lagu yidhi: "Bal ka warran waxaa lacag laguu soo galiyay bangigaaga, laakiin waxaad go'aansatay inaad diidid qaadashadeeda".
Oohin ayey la dhacday intii uu wareysigu socday. "Waxyaabahan ayaa hurdo la'aan igu riday habeen walba. Mar kasta waad carooneysaa waadna isla hadleysaa", ayey tidhi.
Haweenka Afghanistan ayaa la kulma tacaddiyo joogto ah
Waxay hadalkeeda sii raacisay: "Haddii aad cabashadaada u gudbisid garsoore, boolis ama dacwad ooge, mid kasta oo kuwaas kamid ahna wuxuu kaa codsanayaa inaad isaga la seexatid. Marka haddii qof walba uu sidaas sameynayo yaad u dacwooneysaa? Hadda waxay u muuqataa sidii in arrintan ay qeyb ka noqotay dhaqanka, maadaama nin walba oo ku arka uu doonayo inuu gogol kula wadaago".
Lix dumar ah oo aan la kulanay ayaa dhammaantood naga codsaday inaan lasoo xiganin.
Balse sheekada na dhex martay ayaan ka ogaannay in tacaddiyada dhinaca galmada ay yihiin dhibaato ka dhex jirta dowladda Afghanistan, mana aha mid ku kooban hal shakhsi ama hal wasaarad.
Afghanistan mar walba waxay si joogto ah safka hore uga gashaa dalalka ugu xun caalamka ee ay haweenka ku noolaan karaan.
Sanadkii 2018-kii, Qaramada Midoobay ayaa soo saartay warbixin ay ku faahfaahineysay sida haweenka tacaddiyada loo geystay loogu khasbo inay ka noqdaan dacwadaha ay diiwaan galiyeen.